ပက်လက်မျောတဲ့ .. အရုဏ်ချိန် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ပက်လက်မျောတဲ့ .. အရုဏ်ချိန်	7
ပက်လက်မျောတဲ့ .. အရုဏ်ချိန်
Posted by အောင် မိုးသူ on May 7, 2015 in Creative Writing, Short Story |7comments
Alinsett @ Maung Thura says: အမှောင်ထဲကနေ အမှောင်ကို စောင့်ကြည့်တော့…. အမှောင်ကို တွေ့မှာပေါ့…နော်..
ဘာမှ မမြင်ရတာထက်စာရင် အမှောင်ကို မြင်ရသေးတယ်…
Alincho says: ယိုင်နဲ့နဲ့ ထိမ်းရင်းကျောင်းရင်း မြို့ပျက်ထဲမှာဖက်တွယ်နေတဲ့ သူဖုန်းစားတစ်ယောက်လို
Alinsett @ Maung Thura says: အလင်းချိုကို မရှာပေမယ့် …အနော့်ကို များ ရှာသလားလို့… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: ဒညင်းဝက်ကိုတော့ ရှာစရာလား………။
Alinsett @ Maung Thura says: လျှာဆရာက..အနော် မဟုတ်ဖူး.. ဦးကြောင်ကြီး..
အောင် မိုးသူ says: အူးကြောင်က လျှာဆရာလားးးးးးးးးးးးးး ငိငိ
naywoon ni says: အ​ရေးကြီးတာက နှာ​ခေါင်း​ဖော်​ပြီး​နေတတ်​ဖို့ပဲ ဟုတ်​ကဲ့ နှာ​ခေါင်း​ဖော်​ထားပါ့မယ်​ ။ အထက်​ကလူ​တွေ ​လေမလည်​ကြပါနဲ့ ​ကျေးဇူးပြုပြီး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.